Utano hweArabhu - Real Hyperbaric Chamber
musha/Posts/Uncategorized/Utano hweArabhu - Real Hyperbaric Chamber
Tekna has Real Hyperbaric Chambers on Display! Inonyanya kubatikana pazuva rechitatu yei Arab Health Exhibition uye Congress 2018! Tinoshamiswa nemhinduro yakanaka yatakagamuchira pane yedu 3 Atmosphere Monoplace Hyperbaric Chambers uye 3 yedu uye 6 Atmosphere Multiplace Hyperbaric Chambers. 2018 ichava gore rakabatikana zvikuru redu mumba medu ASME-PVHO Pressure Vessel Shop uye Manufacturing Departments. Ndapota uyai uye muone yakapedzisira Hyperbaric Chamber Technology. Tekna has a Hybrid 4000 Hyperbaric Chamber inoratidzwa muhotera Z1.C02 Pano!
By teknamfg|2018-02-01T08:37:12+00:00February 1st, 2018|Uncategorized|Comments Off Nehutano hweArabhu - Real Hyperbaric Chamber